कसरी को नाम ले एक व्यक्ति को ठेगाना फेला पार्न? यसलाई जहाँ एक व्यक्तिले आफ्नो नाम थाह, बसोबास पत्ता लगाउन सम्भव छ?
जीवन मान्छे को आजको frantic गति मा अक्सर आफ्नो साथी, परिवार र प्रियजनहरूलाई सम्पर्कमा गुमाउन। केही समय पछि, त्यो अचानक महसुस गर्न थाल्छ विभिन्न कारणहरूले गर्दा अर्को ठाउँमा बाँच्न सरेको छ जो मान्छे संग संचार को आफ्नो कमी छ। एकदम अक्सर परिस्थिति कसैलाई classmate, सह-कार्यकर्ता वा पहिलो प्रेम देख गर्दा छन्। वास्तविकता मा, एक व्यक्ति धक्का कि कारण साथी वा नातेदार संग एक पटक हराएका सम्पर्क पुनर्स्थापना, विशाल हुन सक्छ। र, सबै भन्दा रोचक छ के, यो अक्सर थर मात्र सँगी विद्यार्थी थाह छ भनेर छ, तपाईं पाउन चाहन्छु। र यो सम्भव सबै छ? कसरी को नाम ले एक व्यक्ति को ठेगाना फेला पार्न? निस्सन्देह, यो छ एक सम्भाव्य कार्य।
हामी आफूलाई सही व्यक्ति पत्ता लगाउन लक्ष्य सेट गर्दा, हामी पहिले नै जानकारी कम्तिमा एक न्यूनतम यसको बारेमा छ। केही अवस्थामा, हामी के आफ्नो थर, नाम, निवास स्थान उहाँले हालै रहते के। निस्सन्देह, व्यक्ति बारेमा थप जानकारीको लागि, सजिलो पाउन छ। रूस, काजकिस्तान वा बेलारुस मा - यो जहाँ तपाईं एक मानिस फेला पार्न आवश्यक कुनै पनि फरक बनाउन गर्दैन। खैर, आफ्नो कथित निवास शहर पनि महत्त्वपूर्ण छैन। फेला एक व्यक्ति साराटोभ र भ्लाडिभास्तोक मा हुन सक्छ। हो, आज वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगति यस्तो स्तर पुगेको छ कि को प्रश्न व्यक्ति को ठेगाना कसरी पाउन एकदम चाँडै नाम, doable द्वारा, र।
को पाठ्यक्रम, तपाईं पछाडि बस्न र कोसँग तपाईं देखेको छैन एक दर्जन वर्ष एक पूर्व सहकर्मी, उहाँले अचानक आफूलाई र तपाईं को लागि खोज पहिलो सुरु समातिए भन्ने तथ्यलाई भरोसा गर्न सक्छन्। तर, यो अक्सर हुँदैन, र सबै किनभने तपाईंको सेना मित्र पनि नाम व्यक्ति को ठेगाना कसरी पाउन को प्रश्नको जवाफ पाउन सक्दैन।
पनि ठाउँ मा: आज, आधुनिक प्रविधि कहीं एक मानिस फेला पार्न अनुमति दिन्छ।
एक व्यक्ति अर्को व्यक्ति भेट्टाउनुहुन्छ जसमा सबै भन्दा साधारण तरिका विचार गर्नुहोस्। अर्को शब्दमा, हामी नाम व्यक्ति को ठेगाना कसरी पाउन को प्रश्न को व्यावहारिक पक्ष मा सार्न।
सबैभन्दा शक्तिशाली खोज उपकरण को एक वर्ल्ड वाइड वेब छ। यो तपाईं विशेष मान्छे फेला पार्न डिजाइन कि स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ RuNet खुला रिक्त छ।
तपाईं नाम र थर द्वारा व्यक्ति को ठेगाना कसरी पाउन बारेमा संकेत छैन? खोज डेटाबेस वर्ल्ड वाइड वेब मा बाहिर राखे जुन प्रयोग गर्नुहोस्।
नियम, यी स्रोतहरू अधिकांश एक शुल्क को लागि एक मान्छे-अन्वेषक सेवाहरू छ, तर तपाईं शुल्क र गुणस्तर मुक्त सहयोग गर्ने ती मा चुक्छौं गर्न सक्नुहुन्छ। तर, हामी runet सजिलै अक्सर एक मोबाइल फोन नम्बर एसएमएस सन्देश पठाउन प्रस्ताव तपाईं व्यक्ति निवास कसरी थाहा समस्या समाधान गर्न भनेर ठगी, पार गर्न सक्ने बिर्सनु हुँदैन। तपाईं यो चाल लागि गिर भने, यो तपाईं मात्र आफ्नो हार्ड-कमाएका पैसा गुमाउनु हुने छैन, त्यो पनि डाटाबेस पहुँच प्राप्त धेरै सम्भावना छ। भयो क्रमबद्ध गर्न, यो एक पटक फेरि जोखिम र छैन "राउन्ड प्राप्त" इन्टरनेट पोर्टल राम्रो छ!
आज, मान्छे को एक विशाल संख्या शाब्दिक आफ्नो मित्र र आफन्त संग कुरा सामाजिक सञ्जाल, दिन र रात मा बाँचिरहेका छौं।
तपाईं लगातार एक मानिस जीवित ठेगाना कसरी पाउन सोचिरहेका छन् भने, उदाहरणका लागि, "स्कूलका साथीहरू", "VKontakte", "Meyl.ru", "ट्विटर", सबै भन्दा राम्रो-ज्ञात जो समावेश, संचार लागि पोर्टल मा खाता प्राप्त गर्नुहोस्। त्यसैले एक प्रेमी वा प्रेमिका फेला आफ्नो संभावना एकदम वृद्धि हुनेछ। तपाईं बस व्यक्ति को खाली ग्राफ नाम चलाउनु आवश्यक - र सिस्टम तपाईं उपयुक्त सूची दिन हुनेछ। तथापि, एक साधारण थर भने, यो उदाहरणका लागि थप जानकारी, आफ्नो मित्र समाप्त कि संस्थाले को उमेर वा नाम आवश्यक हुनेछ।
तपाईं तुरून्त एक व्यक्ति फेला पार्न आवश्यक छ भने, उदाहरणका लागि, तिनलाई एक उत्तराधिकार मा, सबै भन्दा राम्रो तरिका बाहिर आएको व्यवसायीक मदत खोज्न छ सूचित गर्न। यो सेवा गुप्तचरहरू एक दिन लगभग 24 घण्टा देख व्यस्त छन् कि राम्रो छ। तर, यस्तो गुप्तचर काम एक उच्च भुक्तानी आवश्यक भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। सकारात्मक परिणाम को मामला मा एजेन्सी को कर्मचारीहरु राख्नु गर्न तयार त्यसैले आफ्नो काम को लागि "बैंक तोड्न"।
टिभी कार्यक्रम "मेरो लागि प्रतीक्षा"
आज टिभी कार्यक्रम "मेरो लागि प्रतीक्षा" साथै मानिसहरूको ठूलो संख्या देखिन्छ रूस देखि र विदेश बाट, जस्तै बस खत्म रोल को उनको लोकप्रियता दर्जा।
यसको धेरै साथीहरू को मद्दत सम्पर्क पटक हराएको थियो जो आफ्नो प्रियजनलाई, पत्ता लगाउन सक्षम थिए। निवास को नाम ले एक व्यक्ति को ठेगाना कसरी पाउन? माथिको टीवी कार्यक्रम को इन्टरनेट स्रोत लागि अनुरोध राख्न र यसको कर्मचारीहरु तुरुन्तै खोजी सुरु हुनेछ। निष्पक्षता मा उल्लेख हुनुपर्ने मा हराइरहेको नातेदार खोजिरहेको गर्ने मुख्य ती अपील "मेरो लागि प्रतीक्षा"।
तपाईं को नाम ले एक व्यक्ति को ठेगाना कसरी पाउन बारेमा कुनै पनि विचार छैन? तपाईं केवल नाम थाहा गर्दा इन्टरनेट खोल्नुहोस् साइटहरु फोरम र मित्र वा प्रेमिका फेला पार्न चाहेको जानकारी तिनीहरूलाई ठाँउ,: मुक्त तपाईं निम्न गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई आफ्नो सम्पर्क जानकारी छोड्न मान्छे घटनाको तपाईं सम्पर्क सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अनिवार्य छ। तर, तपाईंले, फेरि, तपाईं मा कल र प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ ठगी, एक शुल्क सकारात्मक प्रश्न समाधान गर्न लागि चलाउन सक्ने सम्झना गर्नुपर्छ।
केही अवस्थामा यो तथ्यलाई कारण कडा एक सहयोगी वा सँगी विद्यार्थी लागि खोज यसको स्थान जानकारी व्यक्तिगत डाटा, disclosed हुनेछैन जो भन्छिन् भन्ने बाहिर जान्छ। यो यस कारण लागि हो, यसलाई कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट प्रतिनिधिको तपाईं आफ्नो अनुरोध अस्वीकार गर्ने छैन अचम्मको छ। एक ठहराव आउन एक व्यक्ति को लागि खोज र तपाईंले यसलाई फेला बलिरहेको इच्छा हुँदा, यो व्यवसायीक विश्वास र गुप्तचर एजेन्सी जसको कर्मचारी गुप्तचर काम छैन केवल कौशल छ, ठेगाना गर्न, तर कानून प्रवर्तन अधिकारीहरु, शायद तिनीहरूलाई मदत अस्वीकार गर्ने सञ्चार को अनुभव राम्रो छ।
अदालती प्राविधिक परीक्षा को: वस्तुहरु र विधिहरू
एक काम को लागि एक प्याटेन्ट कसरी प्राप्त गर्ने?
स्वतन्त्रता को संयम
विवरण देशमा को प्रारम्भिक अनुमोदन को: नमूना। FZ "राज्य रियल एस्टेट Cadastre मा"
नागरिक दायित्व - फाराम र प्रकार मा सामान्य प्रावधान
अटलांटिक महासागर कुन महादेशमा धोए छन्? जो देश अटलांटिक महासागर द्वारा धोए छ?
मूल चकलेट केक। विभिन्न व्यञ्जनहरु
पुरातन जर्मन। धर्म र प्राचीन जर्मन को जीवन को बाटो
गायक Anastasia: जीवनी, क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
को XX सताब्दी को सबै भन्दा प्रसिद्ध रक ब्यान्ड
पश्चिम बर्लिन। पश्चिम बर्लिन सीमानाहरू
सान्टा क्लाउस पेन्सिल चरणमा कसरी आकर्षित गर्न। कसरी ग्लास मा सान्टा क्लाउस आकर्षित गर्न
तोते बालिका लागि नाम छनौट
ब्रह्माण्ड "Marvel"। रातो दानव पद दानव ग्रीन